नेपालमा हरेक १० मिनेटमा १ जनाले ज्यान गुमाउँदै – Saurahaonline.com
काठमाडौँ : नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण हरेक १० मिनेटमा एक जनाले ज्यान गुमाउन थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संख्या अहिलेसम्मकै बढी हो ।
‘अझै उच्च बिन्दुमा पुग्नै बाँकी छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘जति संक्रमित थपिँदै जान्छन्, मृत्यु हुनेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ । मृत्यु हुनेको संख्या दुई सातामा अझ बढ्न सक्छ ।’
मृतक संख्या बढ्दै जाँदा पशुपति आर्यघाटमा शव व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । शनिबार ७६, आइतबार ८८ जनाको शव व्यवस्थापन गरिएकामा सोमबार राति १० बजेसम्म ७७ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । ‘अझै शव ल्याइरहेका छन्, कति थपिने हो टुंगो छैन,’ कोषका एक कर्मचारीले भने ।
संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । अन्य विभिन्न जिल्लामा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । वैशाख १६ यता सोमबारसम्ममा अर्थात् १२ दिनमा देशभरि ६ सय ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘अवस्था डरलाग्दो छ । अब कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, ‘अक्सिजन व्यवस्थापन गर्नै नसकेर धेरैले ज्यान गुमाए । कतै बेड छ तर अक्सिजन छैन । कतै अक्सिजन छ, बेड खाली नहुँदा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।’ संक्रमित भएर घरमै बस्ने र थलिएर मात्रै अस्पतालमा जाने हुनाले पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘अक्सिजनको लेबल एकदमै कमी भएपछि मात्रै अस्पताल पुगेका हुन्छन् । त्यतिबेला अस्पतालमा न बेड हुन्छ न अक्सिजन,’ उनले भने ।
भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले ज्वरो आउँदा नजिकको मेडिकलमा ‘वाइडल टेट’ गराएर एन्टिबायोटिक खाएर बस्ने र शिथिल भएपछि मात्रै अस्पतालमा जानेहरूको मृत्यु हुने दर बढेको बताए । ‘दुई/चार दिन एन्टिबायोटिक खान्छन् अनि अक्सिजन लेभल ८० भन्दा कम भएपछि मात्रै अस्पताल आउँछन् । अस्पतालको आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी हुन्छन्, बेड हुँदैन,’ उनले भने, ‘जसोतसो भर्ना गर्छौ तर राम्ररी केयर गर्न सकिँदैन । पहिला ५० जना बिरामी हेर्ने चिकित्सकले २ सय ५० भन्दा बढी हेर्नुपरिरहेको हुन्छ । यस्ता बिरामीलाई १ जना नर्स चाहिनेमा एक जनाले २० जनाभन्दा बढी हेर्नुपरेको छ अनि कसरी बचाउन सकिन्छ ?’
सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर निजी अस्पतालमा पनि संक्रमितको उपचार गर्नुपर्नेमा निजीलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नसकेको उनले बताए । मृत्युको प्रमुख कारण अक्सिजन व्यवस्थापन नहुनु रहेको टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले बताए । ‘एउटा सिलिन्डरमा दुई जनालाई बाहिर राखेर अक्सिजन दिइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा गम्भीर खालका बिरामीलाई बचाउनै गाह्रो छ,’ उनले भने ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ ।